नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालमा वैशाख ३ गते सम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय, मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी, राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त
नेपालमा वैशाख ३ गते सम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय, मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी, राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारद्वारा यही चैत ११ देखि जारी गरिएको लकडाउनको अवधि पुनः थप गरिएको छ । सोमबार (चैत २४) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन अवधि पुनः ८ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको नयाँ निर्णय अनुसार आगामी २०७७ वैशाख ३ गते सम्म लकडाउन जारी रहने छ । यसअघि गत १८ देखि २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको थियो ।
यसैबिच सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । गभर्नर नियुक्त अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएका अधिकारीसँग राष्ट्र बैंकमा तीन दशक काम गरेको अनुभव छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी डाक्टरहरुलाई पनि सरकारी डाक्टरहरु सरह सेवा सुविधा दिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी क्षेत्रका डाक्टरहरु सरकारी अस्पतालमा आएमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर कामको अवसर दिने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा वा काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्न अवसर दिने र उहाँहरुले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकहरुले पाउनेसरहको हुने छ र उहाँहरुको तह पनि त्यसैअनुसार मिलाइने छ ।’
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यसैगरी बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।